Android အတွက် Facebook က | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » Android အတွက် Facebook က
အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက် Facebook က
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက် Keeping ယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ •မိတ်ဆွေများကိုမှတက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရှုပါ
•ဂိမ်း Play နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး apps များကိုသုံးပါ
အကူအညီလိုတယ်? ကိုပြဿနာအကြောင်းပိုမိုပြောပြပေးပါ။ http://bit.ly/invalidpackage
အဘယ်အရာကို Facebook မှာအကြောင်းကိုအကြီးဖွင့်ပါကအသစ် features တွေအတူတက်လာ add-ons တွေကိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အချိန်ကို hacks သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရဲ့အချို့သောပျော်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသူတို့ကိုမကြည့်ကြရအောင်။ သင်သည်သင်၏ News Feed တွေကိုသင့်ရဲ့ဆန္ဒနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသလား? သင်သည်သင်၏အသိအကျွမ်းထဲကနေအသေးအဖွဲ updates များကိုအောက်တွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံမည်ဖြစ်ကြောင်းယုံမှားစရာမရှိ။ အဆိုပါ News Feed တွေကို Preferences ကိုအတူသင်ဂရုစိုက်သည်လူများပထမဦးဆုံးအဖွင့်ပြပါသေချာအောင်သင့်ရဲ့ feed ကိုဦးစားပေးနိုငျသညျ။ သင်တို့သည်လည်းအမြောက်အများအတွက်အသိအကျွမ်းလိုက်အောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပြီးသား iOS အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ပေမယ့်, တူညီတဲ့များအတွက် Android အတွက် update ကိုမကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သည်။
သငျသညျအသေခံပြီးနောက်အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဖွစျသှားသလဲ ကောင်းပြီ, သငျသညျအမွေအနှစ်ဆက်သွယ်ပါရန်သူတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးကထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးမိတ်ဆွေသင့်ရဲ့စာရင်းထဲကလူတစ်ဦးကို select ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကိုသင်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင့်ရဲ့ပို့စ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦး archive ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်ဘူး။
မတ်ေတာရှိသောမိဘများကသူတို့ကလေးကို၏ဓာတ်ပုံများကိုတက်ထားလိုသောနှင့်အတူ, privacy ကိုမေ့လျော့နေသည်။ Facebook ရဲ့အသစ်က update ကိုအတူ, သင်စာတိုပေစများ update ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာမိဘများကသူတို့ကလေးတွေ '' ဓါတ်ပုံရှုမြင်နိုင်သူပိုပြီးထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ကိုသာနှစ်ဦးကိုမိဘများကသူငယ်ကို tag နိုင်သည်ကိုသေချာပါလိမ့်မယ်။
သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးက Facebook အကောင့်မလိုဘဲ Facebook မှ Messenger ကို app ကိုအသုံးပွုနိုငျကွောငျးသိရသလား? Messenger ကိုမှတဆင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေများနှင့်တစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များ option ကိုဖြစ်ကြသည်။ Facebook က Lite ကို Facebook မှတစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါးသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိပ်အဟောင်းတွေဖုန်းများအပေါ်ပိုမြန်ပြေး။ Facebook မှာလည်းလွမ်းဆွတ်မှုဖြစ်ပေါ်ဖို့သေချာဖြစ်ပါသည်, ဒီနေ့တွင်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူတက်ရောက်လေပြီ။ သငျသညျအထူးသဖြင့်ရက်ပေါင်းမှတဆင့်ကြည့်ရှုနှင့်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အမှတ်တရများပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျတူညီသောများအတွက်အသိပေးချက်များကိုဖွင်ကြလျှင်သင်တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ရှိသည့်အခါ, သင်သတိပေးလိမ့်မည်။
Facebook သုံးစွဲသူအသက်အရွယ် 13 နှင့်ကျော်သာရရှိနိုင်သည်။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: m.facebook.com/terms.php ။
60.46 ကို MB
1,000,000,000 + downloads,
Plus အား: ဗီဒီယို ...
Video Downloader ...
maki: Facebook က ...
Facebook ကို Download လုပ်ပါ Facebook က Facebook က APK ကို Android အတွက် Facebook က
မေလ 24, 2019 မှာ 3: 33 နံနက်
အဘယ်သူမျှမ pabg မိုဘိုင်း updates များကို
ဝမ်းနည်းဖွယ်အပြည့်အဝ Saiful says:
အောက်တိုဘာလ 29, 2018 မှာ 4: 56 နံနက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ဒါဟာကောင်းသော apk ဖြစ်ပါတယ်
(R) မှတ်စုစာအုပ် - လွယ်ကူသောအရောင်မှတ်စုများ
EQInfo - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငလျင်